(FAALLO): Maxaa laga filan karaa Doorashadda Madaxtinimada ee Maamulka Somaliland? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Tan iyo markii ay qaar ka mid ah Siyaasiyiinta Maamulka Somaliland ku dhawaaqeen inay ka go’een Jamhuuriyadda Somalia sannadkii 1991-kii, waxaa shalay Deegaanadaasi ka dhacday Doorasho lagu dooranayo Madaxweynaha Cusub ee Maamulkaasi.
Doorashadii shalay ayaana ahayd tii 5-aad ee ka dhacda Maamulkaasi aan weli helin Ictiraaf Czalami iyo mid Gobaleed toona.
Tan iyo markii Maamulka Somaliland looga dhawaaqay magaalladda Burco waxaa Maamulkaasi soo maray 4 Madaxweyne, kuwaasi oo kala ahaa Marxuum C/raxmaan Axmed Cali, Marxuum Maxamed Ibraahim Cigaal, Daahir Riyaale Kaahin iyo Axmed Maxamed Maxamuud “Silaanyo”.
Reer Somaliland oo ku caana-maalaya Nabad, Maamul, Deganaansho iyo Kala-dambeyn ayaa waxay haatan ka wada war-sugayaan Natiijadda ka soo baxda Doorashadii Madaxtnimadda ee shalay loo codeeyey.
Ilaa 700,000 oo qof oo ku nool Goballadda W/galbeed, Togdheer, Awdal iyo qeybo ka mid ah Goballadda Sanaag iyo Sool ayaa shalay safaf u galay, si ay u kala xushaam 3-da Murashax Madaxweyne ee Xisbiyadda Waddani, UCID iyo Kulmiye.
Guddiga Doorashadda ayaana la filayaa inay maalmaha soo socda ku dhawaaqaan Natiijadda Doorahsdda iyo Murashaxa noqon doona Madaxweynaha Cusub ee Maamulkaasi.
Doorashadii shalay ayaa loo arkaa inay ahayd tii ugu ballarnayd ee Qaab Nidaamsan la isugu soo baxay, looguna codeeyey.
Saddex Murashax Madaxweyne ee C/raxmaan Cirro, Faysal Cali Waraabe iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay inay Codad badan ka kala heleen Deegaanadda ay Taageerayaashooda ku xooggan yihiin iyo kuwa ay Dhalasho ahaan ka soo jeedaan.
Waxaana hubaal ah inuu Murashax kasta ka goos adeegi doono haddii uu saluug ka muujiyey Natiijodda Doorashadaasi, waana Dhaqanka Murashixiinta laga guuleysto inay Dood Siyaasadeed ka keenaan Hawlaha Guddiga Doorashadda iyo qaabka loo tiriyey Waraaqaha Cod-bixinta.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in qeylo-dhaanta ugu ballaaran ka imaan karto haddii laga guuleysto Murashaxiinta C/raxmaan Cirro iyo Faysal Cali Waraabe oo iyagu lagu xanto inay yihiin Siyaasiyiin Bud-la-duul ah.
Murashaxa kale ee Muuse Biixi ayaa isaga loo arko haddii laga guuleysto inuu ku qanci doono iyo inuu hambalyeyn doono Murashaxa nasiibka u hela Xilka Madaxweynaha Cusub ee Somaliland.
Qoddobka kale ee indhaha lagu hayo ayaa ah Qorshaha Madaxweynaha Cusub ee Somaliland iyo Galaangalka Siyaasadeed ee uu u yeelan karo Ictiraaf-doonka iyo Fulinta Ballanqaadyadda Siyaasadeed eeuu sameeyey Xilligii uu ku jiray Ololahiisa Doorashadda.
Madaxweynaha Cusub ee la-doorto ee Maamulka Somaliland waxaa uu Isbaaro-siyaasadeed kala kulmi doonaa Hoggaamiyayaasha Xisbiyadda Mucaaradka ee ay ka go’an tahay inay Xisbi Xaakim kasta la galaan Xarig-jiid Siyaasadeed iyo inay Toosh ku iftiyaan Qaladaadka Taagan.
Madaxweynihii hore ee Somaliland, Axmed Silaanyo ayaa lagu dhaliilaa inuu si aan ka-fiirsasho lahayn Qalinka ugu duugay Heshiiskii uu Shirkadda DP World ugu wareejiyey Maamulka Dekedda Berbera, Saldhiga Milliteri ee Imaaraadka la siiyey iyo in Dowladda Ethiopia saami lacageed laga siiyo Dakhliga Heshiiska lala galay Shirkadda DPW ee maamusha Dekedda Berbera.
Yabooha noocaasi ah ayaa la sheegay in Madaxweyne Silaanyo ku il-duufay, isla markaana uusan il naxariis leh ku eegin Shaqao La’aanta haysata Dhallinyarada Somaliland iyo Reer Guuraaga ku cayrtoobay Abaarihii iyo Nabaad-gurka ka dhacay inta badan Goballadda Somaliland.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay Faysal Cali Waraabe ama C/raxmaan Cirro midkooda ku soo baxo Doorashadda, waxa hor taalla Shaqo Siyaasadeed aad u adag iyo Diplomaasiyadda Baadi-goobka Ictiraaf-doonka 26-sanno jirsaday iyo Dib-u-eegista Heshiiskii Shirkadda DP World iyo Saamiga Lacageed ee Dowladda Ethiopia sabab la’aanta looga siinayo Dakhliga Heshiiska Laba Geesoodka ee Maamulak Somalland la galeen Shirkadda DP World.
Daawo:-Muuqaalka Gaarigii ku qarxay Isgoyska Zoobe bil ka hor oo la helay